Tsy ny hita eny amin’ny lalam-baovao sy ny eny Ivato ihany no tiana holazaina fa ireo hetsika politika ataon’ny mpanohana sy mpanohitra ny fitondrana miseho amin’izao fotoana izao koa. Ny an-daniny mahavita mampivory mpanao gazety mihitsy ny fiandohan’ny herinandro teo hidradrana fa tokony hovoizina hoe misy tombontsoa ho antsika ny fandraisana ny fihaonana an-tampon’ny frankofonia. Ny an-kilany kosa ny mifanohitra amin’izay no voiziny. Ny an’ireto farany moa dia nisy ny efa nitarika fihetsiketsehana an-dalambe omaly saingy tsy nahasarika olona satria be, hoy izy ireo, ny fandrahonana isan-karazany natao tamin’ireo vahoaka sy ny fandrahonana hosamborina ny mpitarika. Anio dia mbola samy hanohy ny fihetsiketsehany koa ny roa tonta. Ny iray hanaratsy endrika ny fihaonambe, ny an-kilany kosa haneho amin’ireo vahiny fa milamina eto amin’ny firenena. Dia ho hita izay ho vokany.